आईतबार देखि नेपाल र कतार बीच हरेक दिन उडान हुने ।
नेपाल सरकारले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप गरी नयाँ तालिका नेपाल
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पठाएसंगै कतार र नेपाल बीच अब हरेक दिन उडान हुने भएको हो । क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार अब हप्तामा कुल ५३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न देशका
गन्तव्यमा उडान तालिका तय गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ उडान सङ्ख्या थप गर्दै यसअघि उडान खुला गरेका गन्तव्यमा भारतबाहेकका देशमा हुने उडान सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यस्तो छ नयाँ तालिका !
क्यानको उडान तालिकाअनुसार कतारको दोहामा नेपाल एअरलाइन्स र कतार एअरवेजले हरेक दिन उडान गर्नेछन् भने हिमालय एअरलाइन्सलाई हप्ताकाे सोमवार, बुधवार र शनिवार उडान अनुमति दिइएको छ ।
नयाँ तालिका अनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हप्तमा दुई उडान सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय ध्वजावाहकले गर्नेछन् । नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स) ले बुधवार र एअर इन्डियाले सोमवार गर्नेछन् ।
हिमालय एअरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा हप्ताकाे चार दिन आइतवार, सोमवार, बुधवार र शुक्रवार उडान हुनेछ ।
यस्तै नेपाल एअरलाइन्सले यूएईको दुबईमा मङ्गलवार र बिहीवार तथा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको हिमालय एअरलाइन्सले आइतवार, मङ्गलवार र बिहीवार उडान भर्नेछन् । फ्लाई दुबइले आइतवार, बुधवार र शुक्रवार एक/एक उडान गर्नेछन् ।
नेपाल एअरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा बुधवार र शनिवार हप्तमा दुई उडान पाएको छ । त्यस्तै हिमालय एअरलाइन्सले बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार क्वालालाम्पुर उडानको अनुमति पाएको छ । टर्किस एअरलाइन्सले टर्कीको इस्तानबुलमा सोमवार, बिहीवार र शनिवार उडान गर्नेछ ।
जजिरा एअरवेजले कुवेतमा हप्ताकाे पाँच दिन सोमवार, मङ्गलवार, बुधवार, बिहीवार र शनिवार उडान गर्नेछ । सलाम एअरले ओमानको मस्कटमा हप्तामा तीन दिन सोमवार, बुधवार र शनिवार उडान गर्ने तालिका पाएकाे छ । एअर अरेबियाले आबुधाबीमा आइतवार र मङ्गलवारको उडान तालिका पाएको छ । सिङ्गापुर एअरले हरेक आइतवार काठमाण्डाै उडान गर्नेछ ।
को’भिड–१९ महामा’री नि’यन्त्रणका लागि सरकारले गएकाे वैशाख २० गतेदेखि आन्तरिक तथा वैशाख २३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सम्बन्धित देशले उडान सहजीकरण गरेको खण्डमा आवश्यकताको आधारमा उडान तालिका थप–घट गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ…. यो समाचार कियु यन खबरबाट लिइएको हो ।
२०७८ असार २६, शनिबार १८:५० गते 1 Minute 186 Views